Sanqadh yarida Diwaangelinta Gabiley oo Sahayatey Gobolnimadii yaa sababteeda leh? - Haldoornews
Sanqadh yarida Diwaangelinta Gabiley oo Sahayatey Gobolnimadii yaa sababteeda leh?
Tani iyo markii Diiwaangalinta Codbixiyayaashu si rasmi ah uga bilaabmatay Gobalada Somaliland, waxay bulshadu aad u hadal heysaa tirada Codbixiyaasha ee gobol kastaa yeelan doono. Tiradaas oo sida qorshuhu yahey lagu saleyn doono shaxda Kuraasta Xildhibaanada Golaha Wakiilada ee horaanta sannadka 2017 doorashada kusoo bixi doona. Maadaama Shaxda Kuraasta Xildhibaandu ku xidhnaan doonto Tirada Cobdixiyaasha Diwaangelintu soo saari doonto, masuuliyiinta Asxaabta Qaran, Siyaasiyiinta talada Dalka haya iyo kuwa han siyaasadeed ka guuxayo ayaa dhamaantood ku mashquulsan wacyi-gelinta bulshada gobolada ay ka soo jeedaan iyagoo ku dhiirigelinayaa in ay si baaxad leh uga qeyb qaataan Diwaangelinta Cobdixiyaasha.
Bulshada Gobolka Gabiley ee 25-ka sanno Jamhuuriyada Somaliland jirto u heelan Gobolnimo sharciyaysan ayaa filaysa in tirada Codbixiyaasha ka soo bixi doona Diwaangelinata ay xoojin doonto rabitaankeeda Gobolnino, maadaama isu heysato in ay Somaliland ugu tira badan tahey. Haddaba Diiwaangalinta codbixiyayaasha ee 12-3-2016- si rasmi ah uga bilaabmatay gobolada Saaxil, Hawd iyo Gabiley ayaa, natiijada hor dhac ah timaameysa in faankii Reer Gabiley aanu rumoobeyn, sida dad xog-ogaal ah soo warinayaa. Goobaha Diwaangelinta magaalada Gabiley ayaa u muuqdey goobo hawanaaya tiiyo dadku ku sababeynayaan wacyi-gelin la’aanta masuuliyiinta heer Gobol iyo heer Qaran. Waxaana muuqata, haddii qaab darada Diwaangelinta Gobolka ka socotaa sidaa ku dhamaanto in ay saameyn xun ku yeelan doonto Hanka Gobolnino ee Gebiley, masuuliyada guul darradaana waxa dhabarka u ridan doona dadka maanta sheegta in ay yihiin Haldoorka Gobolka, gaar ahaa, Xubnaha Baarlamaanka Ugu Jira Gabiley ,Xubnaha Golaha Wasiirada Ee Ku Abtirsada Gabiley Iyo Maamulka Heer Gobol Iyo Heer Degmo . Tirada hor dhac ah ee la sheegayaa haddi ay rumoday waxa kale oo sameyn hoos u dhac ku keenin doonta qiimaha iyo qadarinta ay musuuliyiinta Gobalku ku leeyihiin Asxaabta Qaranka dhexdooda. Arrinta ayaa sido kale xoojin doonta dooda dadka qaarkood qabaan ee ah in Gabiley aaney waligeed ka hoos bixin Gobolka Maroodi-Jeex.
Maxamuud-Yaasin Cabdillai Ciro
Hadimooyinka Qabyaaladaysan Ee Uu Xisbiga Mucaaridka Ee Wadani Ku Hayo Warbaahinta….W/Q Khaalid Bulshaawi.